खुल्यो प्रदेश सरकारको बाटो | eAdarsha.com
खुल्यो प्रदेश सरकारको बाटो
प्रदेश सांसदको शपथ
पोखरा, ७ माघ । प्रदेश ४ का सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेशका जेठा सांसद जनकलाल श्रेष्ठले ५७ जना सांसदलाई शपथ गराए । ६७ वर्षीय श्रेष्ठले त्यसअघि नै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग उनकै कार्यकक्ष -साविक अध्यागमन कार्यालय) मा शपथ बुझेका थिए । श्रेष्ठ नयाँ सभामुख निर्वाचित नभएसम्मका लागि स्वतः सभामुख समेत तोकिएका छन् ।
प्रस्तावित प्रदेशसभाको भवन पोखरा नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा शपथको कार्यक्रम गरिएको हो । सामूहिक शपथ ग्रहण हुँदा २ जना सांसद सहभागी भएनन् । तनहुँ क्षेत्र १ प्रदेशसभा (क) का सांसद रामबहादुर गुरुङ र मनाङ प्रदेशसभा (ख) का सांसद राजीव गुरुङ -दीपक मनाङे) सहभागी नभएका हुन् । तर ढिलो गरी उपस्थित भएकाले रामबहादुरलाई पछि शपथ गराइएको छ ।
मनाङे भने ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालती फैसलापछि पक्राउ आदेश लिएर बसेको प्रहरी नजिक पर्न चाहेनन् । उनी पक्राउ पुर्जी काटेको खबर पाएपछि फरार छन् । हाल शपथ नलिएका कारण मनाङे राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘आज निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार शपथ लिएका जति सबै मतदाता भएका छन्’-क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रमुख गंगालाल सुवेदीले भने-‘राजीव गुरुङको बारे हामीले केन्द्रमा लेखी पठाएका छौं । सम्भवतः वहाँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न ।’ उनको नाम घटेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि प्रदेश ४ बाट २ सय २९ जना मतदाता कायम भएका छन् । निर्वाचन आयोगले माघ २५ का लागि चुनाव घोषणा गरेर कार्यतालिका अनुसार काम गरिरहेको छ ।
सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि देशको संघीय प्रणाली अनुसार दोश्रो तहको सरकारले आकार लिन थालेको छ । शपथ बुझेपछि यहाँका सांसद आपसी भेटघाट र विकासे एजेण्डाबारे छलफल गर्न थालेका छन् । मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा विष्ट प्राकृतिक श्रोत र सम्पदालाई उच्चतम उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने बताउँछन् । नवलपुरका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पनि विकासका आधारभूत पूर्वाधार विस्तारका लागि आफ्नो सक्रियता रहने धारणा राख्छन् । ‘कालिगण्डकी कोरिडोर ४ नम्बरको विकासे ढोका हो । त्यसबाहेक यहाँका अन्य राजमार्ग पनि स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुछ’-उनले भने-‘जनताले मलाई काम गर्नका लागि निर्वाचित गरेका हुन् । उनीहरुको भावना मर्न दिन्न ।’
कास्कीका सांसद विन्दुकुमार थापा पनि प्राकृतिक श्रोतसाधन प्रयोग तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने योजना बुनिरहेका छन् । उनले एग्रो टुरिजमलाई समृद्धिको मुख्य एजेण्डाको रुपमा स्थापित गर्ने बताए । गोरखाका सांसद हरिशरण आचार्यले राजनीतिक सहमतिमै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र विकासको गुरुयोजना तयार गरेर काम थाल्ने प्रतिक्रिया दिए । तनहुँकी सांसद आशा खनालले विकेन्द्रिकरणको अभ्यास शुरु भएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइन् । सबैजसो सांसदले विकासे मोडलबारे आफ्ना धारणा पोखिरहेका छन् ।
प्रदेशको पहिलो बैठक निर्वाचन परिणाम आएको २० दिनभित्र बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश प्रमुखले सभाको बैठक बोलाउनेछन् । अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् । प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । एकल पार्टीको बहुमत नपुगे दुर्इ दलको समर्थन प्राप्त गर्नेलाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ । बैठकको १५ दिनभित्रै प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुनेछन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेछ।
शपथसँगै सरकार गठनमा नेताको चासो
प्रदेश सांसदको शपथपछि अहिले मुख्यमन्त्री र सरकार गठनको बहस शुरु भएको छ । वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीकै संयुक्त सरकार गठन हुने पक्काजस्तै छ । यद्यपि पार्टीएकीकरण र आन्तरिक तयारी सार्वजनिक नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । एमाले एक्लैले प्रदेश ४ को सरकार गठन गर्न सक्दैन । सरकार गठनका लागि चाहिने ३१ सिट माओवादी बाहेक एमालेको सामान्य कसरतबाट पनि पूरा हुन सक्छ । स्वतन्त्र भनिएका मनाङका सांसद राजीव गुरुङ -दीपक मनाङ्गे) ले एमालेकै सहयोगमा चुनाव जितेका हुन् । उनी एमाले प्रवेश गर्ने र अपुग ३ सांसद जनमोर्चाबाट लिए पनि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्छ । एमाले एक्लैले यो प्रदेशमा २७ सिट पाएको छ । प्रत्यक्षमा १७ सिट जितेको छ भने १० जना समानुपातिक सांसद छन् ।
उता, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिक ३ गरी १२ सिट पाएको छ । दुवैको मिलाउँदा ३९ सिट वाम गठबन्धनले मात्रै पाएको छ । अझै राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ जना जोड्दा ४२ सिट हुन्छ । काँग्रेसको यो प्रदेशमा १५ सांसदमध्ये प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिक ९ जना छन् । बाँकी रहेको ३ सांसदमा नयाँ शक्तिको २ र १ जना स्वतन्त्र छन् ।
काँग्रेसमा संसदीय नेता को ?
गठबन्धन भएमा यो प्रदेशमा काँग्रेसको सरकार हुँदैन । तर बलियो प्रतिपक्षी भने कायमै छ । १५ सिट जितेको काँग्रेसमा अहिले संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने नामावली चर्चामा छन् । काँग्रेसबाट नवलपुरका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली संसदीय दलको नेतामा मुख्य दावेदार हुन् । नवलपरासीका काँग्रेस पूर्व सभापति र केन्द्रिय सदस्य समेत बनिसकेका उनी प्रदेशमा चुनाव लडेर मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा थिए । तर काँग्रेसको पराजयले उनको त्यो यात्रा लगभग टुंगिएको छ । यद्यपि संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर कायमै छ । यता प्रदेश राजधानी र बलियो प्रतिष्पर्धामा चुनाव जितेका कास्कीका सांसद विन्दुकुमार थापा पनि बलिया दावेदार हुन् । प्रदेश राजधानी पोखरामा भएको कारण र उनी पनि पोखराकै सांसद भएका कारण उनलाई केही नेताहरुले दावेदारको रुपमा अघि सारेका छन् । काँग्रेस पूरै क्लीन स्वीप भएको कास्कीमा बागी उम्मेदवारबीच पनि उनले चुनाव जितेका थिए ।
समानुपातिकतर्फ सांसद संसदीय दलको नेता भए कुमार खड्का बलियो छन् । खड्का अखण्ड पार्टीाई काँग्रेसमा विलय गराएर प्रदेशको समानुपातिक सांसद बनेका हुन् । उनी हाल काँग्रेसको केन्द्रिय आमन्त्रित सदस्य पनि हुन् । खड्का पनि मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश सांसद बनेका काँग्रेस श्रोत बताउँछ ।
‘सरकारी सुविधा समाजसेवामा’
गोरखा क्षेत्र २ प्रदेशसभा (ख) का सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले आफूले सांसदको हैसियतमा पाउने सबै सेवा र सुविधा समाजसेवामा लगाउने बताएका छन् । आइतबार शपथग्रहणपछि बाहिरिँदै उनले सरकारी सुविधा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको वडातहमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘सबैभन्दा पहिले मलाई यहाँ पुर्‍याइदिने जनतालाई धेरै धन्यवाद छ । समाजसेवाबाट मेरो राजनीति शुरु भएको हो’? पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने-‘५ वर्षसम्म पाउने सुविधा मेरै क्षेत्रको हरेक वडामा दिने घोषणा गरेको छु । राजनीति र सामाजिक सेवामा हामी जसरी होमिन्छौं, त्यसको उदाहरण म देखाएरै छाड्छु ।’ उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश ४ को विकासका लागि तत्कालै योजना तय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग घचघच्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
दवाडीले प्रदेशमा गोरखाको बलियो उपस्थिति जनाउने बताएका छन् । ‘राजनीतिकर्मी भएकाले मेरो पार्टीको धारणा पनि मैले बुझ्नुपर्छ । जनताका आवश्यकता मनन गर्नुपर्छ’-उनी भन्छन्-‘गोरखाको बलियो उपस्थिति प्रदेशमा रहनेछ । त्यसमा मेरो भूमिका सक्रिय हुन्छ ।’ उनले राजनीतिभन्दा अघिदेखि नै गोरखाका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रुपमा छात्रवृत्ति सहयोग गर्दै आएका थिए । हालसम्म १ सय ५६ जना विद्यार्थीलाई सहयोग गरेको दवाडीले बताए ।